Ahịa na ire ahịa Ugbu a bụ ego maka 48% nke mmefu ego IT | Martech Zone
Friday, December 19, 2014 Friday, December 19, 2014 Douglas Karr
Anyị anụla nke a nwa oge, mana ọ ka dị mkpa na ụlọ ọrụ ga-amata eziokwu ahụ na mmefu ego na-agbanwe. Ndị ụlọ ọrụ na-aga n'ihu itinye ego na teknụzụ ahịa iji nyere ha aka inweta, njigide, na atụmatụ dị elu na-agbakwunyeghị ọrụ mmadụ. Ọ bụ ezie na ntinye ego IT bụ isi nchebe na itinye ego n'ihe egwu - na okwu ndị ọzọ, "nwere" - itinye ego azụmaahịa na-aga n'ihu na-achọ nloghachi na itinye ego na nyocha zuru oke
Agbanyeghị CIOs ka na-ebute ụzọ n'ihe banyere itinye ego IT, ndị na-ere ahịa na-ejide ngwa ngwa. Mmefu IT na-eduzi azụmaahịa na-akpata 40% nke mmefu ego CIOs, dị ka data na-adịbeghị anya site na ụlọ ọrụ ndụmọdụ CEB. Na mgbakwunye na mmefu a, ahịa na-ewepụta 25% nke mmefu ego ya na teknụzụ na ahịa na-ekenye 23%. Direct Akụkọ Mgbasa Ozi
Joe Staples, CMO na AtTask, onye na-eweta ngwanrọ na-ahụ maka ọrụ maka ụlọ ọrụ ahịa nke nha niile, kesara echiche ya banyere ihe ọhụụ ọhụụ ọhụụ a pụtara maka ndị ahịa ahịa:
Nkà na ụzụ abụghị mgbe niile panacea: ndị isi ahịa nwere ike ịlele ụgwọ na teknụzụ na ihe ọghọm mgbe ha na-erite uru ụfọdụ ngwaahịa ọhụrụ.
Ruo ọtụtụ afọ ụlọ ọrụ IT adabala n'ọnyà nke ịtụ ihe ịga nke ọma n'ihe banyere oge, ntinye ego nke ike ọhụrụ, na-eleghara ma ikike ndị ahụ ọ na-eweta uru. Ndị na-ere ahịa ahịa ga-akpachara anya maka otu ọnyà ahụ: ọ bụrụ na anaghị anabata teknụzụ nke ọma, ndị ọrụ nwere ike ghara ị nweta uru nweta ọrụ nke ihe ngwọta ọhụrụ gị kwere nkwa. Must ga-ezere n'okpuru itinye ego na njikwa ma na-eburu n'uche ọdịiche ndị ọrụ.
Mepụta ngwọta iji nyere ndị ọrụ aka ịkekọrịta ma melite teknụzụ - E jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ IT, ndị ahịa na-ere ahịa nwere ike ịchọta ụzọ kacha mma maka ịmekọrịta ma na-arụ ọrụ na-arụpụta ihe, mana ọ bụ na ha anaghị ekerịta nchọpụta teknụzụ ndị otu a. Iji merie nke a, ndị isi azụmaahịa kwesịrị igosipụta teknụzụ nke ndị ọrụ ha kwuru.
Tags: AtTaskonye isi ozicioozi ahia ahiajoe staplesahia mmefu egoire egoteknụzụ mmefu ego
Kedu usoro nyiwe ahịa kachasị mma?